Sandals, Wyndham, Marriott & Hilton: Qaabka Curaçao Fasaxa Riyada Ameerika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Curacao Breaking News » Sandals, Wyndham, Marriott & Hilton: Qaabka Curaçao Fasaxa Riyada Ameerika
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Caribbean • saaciday inay • Curacao Breaking News • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirka Warka Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Sandals, Wyndham, Marriott iyo Hilton waxay xusayaan midabka midabka leh ee Dutch Caribbean Island Curacao waxayna ku biirayaan Shirkadaha Diyaaradaha si ay u sameeyaan koox guuleysata oo farxad u ah booqdayaasha Mareykanka iyo Kanada.
Diyaaradaha ayaa ku biiraya sheeko jacayl oo fasax ah si loogu oggolaado Socotada Ameerika inay la kulmaan nasasho COVID oo ay noqdaan Dutchman Curacao
Noocyada sida Sandals -ka, Wyndham iyo Hilton oo dhammaantood calan ku beeray Curaçao.
Airlift to Curaçao ayaa si buuxda ugu soo laabatay socdaalayaasha Waqooyiga Ameerika.
Shuruudaha gelitaanka Curaçao iyo borotokoollada badbaadada ayaa la qabsaday si ay ula jaanqaadaan jawiga socdaalka ee soo kordhaya.
Jasiiradda Curaçao ee Kariibiyaanka Nederland ayaa dhowaan aragtay horumaro huteel oo cusub oo dib loo calaamadeeyay oo ay taageerayaan sumcadaha martigelinta ugu sarreeya adduunka, iyo sidoo kale ballaarinta marinnada duulimaadka. Laga soo bilaabo Marriott oo si buuxda loo dayactiray si loo kordhiyo xulashooyinka loo dhan yahay sida Riyooyin iyo Sandals, iyo sidoo kale guryaha cusub ee calanka leh sida Trademark by Wyndham iyo Curio by Hilton Collection, Curaçao wuxuu ku faanaa inuu bixiyo hoy cusub oo kala duwan oo wax ka qabta qulqulka socdaalka Waqooyiga Ameerika .
Curaçao wuxuu ku faanaa Huteelo Cusub, Duulimaadyo Balaariyay oo loogu talagalay Socotada Mareykanka iyo Kanadiyaanka
Tani waxay u ahayd sanad xoog leh ballaarinta jasiiradda oo leh sumado sida Sandals, Wyndham iyo Hilton oo dhammaantood calan ku beeray Curaçao.
Horraantii 2021, Sandals Resorts International waxay ku dhawaaqday inay u beddeli doonto Santa Barbara Beach & Golf Resort hadda Sandals® Royal Curaçao. La bilaabay in la bilaabo dabayaaqada 2021-ka, isbeddelku wuxuu marka hore ka koobnaan doonaa 350 qol oo raaxo leh iyo suuliyo ku fidsan dhinaca Biyaha Isbaanishka iyo Badda Kariibiyaanka, iyada oo la ballaarinayo ballaarinta sanadaha soo socda. Qorshayaasha fikirka ah ee loogu talogalay hoteelka waxaa ka mid ah in lagu daro qodobo muhiim u ah waayo -aragnimada Sandals -ka saxiixa, oo ay ku jiraan barkado cusub oo ballaaran, xulashooyin kala duwan oo wax lagu cuno, hoy aad u wanaagsan, iyo Suites River oo dhowaan la dhisay. Martidu waxay sidoo kale marin u heli doonaan koorsada golf-ka golf-ka ee Pete Dye ee 18-dalool, laba marinas oo goobta ah iyo 38,000-cag-cag-cagood oo ah gudaha iyo dibedda iyo goobta kulanka-ugu weyn jasiiradda markii la dhammaystiro. Sandals® Royal Curaçao wuxuu sii socdaa 4 -ta Agoosto, 2021 waxaana lagu wadaa inuu si buuxda u furmo 14 -ka Abriil, 2022 -ka.
Bishii Maajo 2021, Kunuku Aqua Resort waxay noqotay qayb ka mid ah Ururinta Summadaha ee Wyndham portfolio, oo ah ururinta sumcad-dhexe oo heer sare ah iyo huteelada ka sarreeya oo ilaaliya ruuxooda madax-bannaanida iyo shakhsiyadda. Dalxiiska ayaa hadda ku jira dib -u -habeyn dibedda iyo gudaha ah, oo ay ku jiraan dhammaan qolalka iyo guryaha, oo lagu wado in la dhammaystiro 2022.
Ugu dambayntii, bishii Juun 2021, Hilton wuxuu ku dhawaaqay saxeexa Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort ee dhowaan la furay inuu yahay hantida ugu cusub ee ku biirta Ururinta Curio ee faylalka Hilton. Waxaa iska leh Corendon Group, goobta loo dhan yahay ayaa la filayaa inay beddesho bisha Sebtember 2021 waxayna dib u aasaasaysaa joogitaanka Hilton ee jasiiradda. Cutubkeeda xiga oo ah hanti uruurinta Curio, Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort waxay siin doontaa waayo -aragnimo qumman oo loogu talagalay dadka safarka ah ee xiisaha leh, halka ay sidoo kale u adeegayso kuwa raadinaya dib -u -noqoshada Caribbean -ka xasilloon.